आज मङ्सिर १७ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
आज मङ्सिर १७ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
मङि्सर १६, २०७७ ST
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अनुकूल नरहला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छ। छोटो यात्राको सम्भावना छ। लेखन तथा साहित्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीबाट भरपूर साथ सहयोग मिल्नेछ।
जिद्दी स्वभाव त्याग्नुहोस्, अन्यथा झै-झगडा हुनसक्छ। लेखकहरू, कारीगरहरू र कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनेछन्। तपाईंको सुमधुर बोलीले अरु मानिस प्रभावित् हुनेछन्। यस दिन नयाँ कार्य सुरु नगर्नुहोला। यात्रा गर्दा सावधान रहनुहोला।
साथी वा परिवारसँग स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। वित्तीय लाभहरूको योग छ। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ। रमणीय यात्राको योग रहेको छ। परिवारमा सकारात्मक वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ।
अत्यधिक खर्च हुनेछ। परिवारको वातावरण पनि राम्रो नरहला। परिवारका सदस्यसँग मनमुटाव हुनसक्छ। मनमा धेरै प्रकारको अनिश्चितताको कारण मानसिक अशान्ति रहनेछ। वाणीमा संयम राख्नुहोला। स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-प्रतिष्ठा घट्न सक्छ।
यस दिन तपाईंले दिएको अवसरको फाइदा लिन सक्षम हुनुहुने छैन। मित्र वर्ग र विशेषगरी महिला मित्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन वा नयाँ कार्य सुरु गर्न दिन शुभ छैन। स्वादिष्ट तथा उत्तम भोजन प्राप्त हुनेछ।
नयाँ कार्यहरू सम्बन्धित सफल कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आर्थिक सफलता मिल्नेछ। घरमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्।
कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारी तपाईंसँग असन्तुष्ट रहेछन्। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या आउनसक्छ। सन्तान सम्बन्धि विषयले मन चिन्तित रहनेछ। धार्मिक यात्राको योग छ। लामो यात्राको सम्भावना छ। लेखन तथा साहित्य क्षेत्रम सफलता मिल्नेछ।
क्रोधमा संयम राख्नुहोला। अनैतिक गतिविधिबाट टाढा रहनुहोस्। खर्च धेरै हुनाले आर्थिक समस्या आउनसक्छ। तपाईंको काम समयमै सम्पन्न हुने छैन। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। शारीरिक तथा मानिसक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ।
सामाजिक क्षेत्रम मान-सम्मान बढ्नेछ। साथी-भाईसँग रमणीय भेटघाट हुनुका साथै यात्राको सम्भावना छ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनका साथै नयाँ वस्त्र पाएर तपाईं प्रशन्न हुनुहुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। विपरित लिंगी प्रति आकर्षण बढ्नेछ।
व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायका लागि भावी योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हुनेछ। आर्थिक लेनदेन सावधानीपूर्वक गर्नुहोला। धन लाभको सम्भावना छ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। परिवारका सदस्यसँग आनन्दमय समय बित्नेछ।
लेखन तथा सिर्जनात्मक कार्य पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। स्त्री वर्गले वाणीमा संयम राख्नुहोला। यात्रा गर्दा सावधान रहन जरूरी देखिन्छ। यस दिन नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस्। आकस्मिक खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। सन्तान सम्बन्धि विषयले चिन्ता हुनसक्छ।
परिवारमा वडा-विवादको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ, सजग रहनुहोला। आमाको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। धनहानि तथा मानहानि हुने सम्भावना छ। महिलाहरूसँग व्यवहार गर्दा होशियार रहनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धि चिन्ता रहन सक्छ। यस दिन पानीबाट टाढा बस्नुहोस्।
प्रकाशित : मङ्गलबार, मङि्सर १६, २०७७१४:०५
१ महिना अगाडि ST
गाउँमा आलुको हाहाकार, बीउ समेत पाउँ मुस्किल !
बलिउडका अभिनेत्रीभन्दा निकै हट र सुन्दर छन साउथका यी ५ नायिकाहरु!
३ महिना अगाडि SLPA
यदी तपाई शाकाहारी हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस यी ८ गल्ती!
रुबीनाले स्विकारिन श्रीमानसँग मनमुटावको कुरा, बताइन कसरी सुध्र्यो सम्बन्ध!